INETFLIX NGUMAKHI WEENKOSI NJENGOKO ILIWA LIBIZWA NJENGOYENA MDLALI UHLAWULWA KAKHULU. JONGA I-10 EPHEZULU-IRADIO TIMES - IIMUVI
INetflix ijika ikingmaker njengoko iliwa libizwa njengoyena mdlali uhlawulwa kakhulu eHollywood. Ngubani omnye okuluhlu oluphezulu?
UDwayne The Rock wasigcina isikhundla sakhe njengoyena mdlali uhlawulwa kakhulu kwihlabathi, efumana ingxelo eyi- $ 87.5 yezigidi (£ 67m) ukusukela ngoJuni 2019 ukuya kuJuni 2020.
Forbes idale uluhlu lwayo lonyaka lwabenzi bemali abaphambili baseHollywood kwaye yaxela ukuba iNetflix yayiyeyona nkokhelo iphambili, ibe negalelo elingaphezulu kwekota yemivuzo yamadoda aphambili ayi-10, umvuzo wawo odibeneyo wawuyi- $ 545.5m (£ 418m).
UDwayne Johnson ubambe uluhlu lonyaka wesibini ngokulandelelana nge- $ 87.5 yezigidi, eqokelela i-23.5 yezigidi zeedola ngendima yakhe njengelisela lobugcisa elileqa iarhente ye-Interpol kwifilimu yeNetflix ezayo yeSaziso esiBomvu.
Impembelelo yeNetflix ayikaze ibonakale ngakumbi kunalo nyaka uchaphazelekileyo yi-COVID. INetflix ixhomekeke kwimirhumo yenyanga endaweni yebhokisi yokuthengisa itikiti kunye ne-10 ephezulu bubungqina kwimpembelelo ekhula ngokukhawuleza yenethiwekhi yokusasaza. I-Forbes kulindeleke ukuba ityale imali engaphezulu kwe- $ 17 yezigidigidi (i-13 yeebhiliyoni) kumxholo kulo nyaka, ngelixa i-Apple TV + kuthiwa icwangcisa ukuchitha i-30 yezigidi zeedola ukubamba umtyikityo kaRyan Reynolds kwi-A Christmas Carol.
Esinye isibonakaliso samandla eNetflix sisikhundla sika-Adam Sandler njenge-Nombolo 9 kuluhlu lwabantu abafumana imali ephezulu, ngaphandle kokuba kukhutshwe imovie enye, eyona nto ibalulekileyo i-Uncut Gems, awayeyizuzele i-5 yezigidi zeedola. Kodwa iNetflix yahlawula iSandler i-31 yezigidi zeedola- iipesenti ezingama-75 zento ayenzileyo unyaka wonke-njengenxalenye yesivumelwano seedola ezingama-250 awasayina ngo-2014.
Isivumelwano sokuthandwa kukaSandler yinto yokuba ababhalisi beNetflix basasaze ngaphezulu kweebhiliyoni ezimbini zeyure yendoda ehlekisayo, ekhokelele kwisivumelwano esitsha esityikitywe ngoJanuwari ekubikwa ukuba kufanelekile nangaphezulu kunesokuqala.
Abadlali abaphezulu be-Forbes abayi-10 bahlawulwa kakhulu ngo-2020
1. UDwayne Johnson- $ 87.5m
Iliwa lafumana i-23.5 yezigidi zeedola kwiSaziso esiBomvu kunye nelayini yakhe yangaphantsi kweZambatho zeProjekti yeLitye.
2. URyan Reynolds- $ 71.5m
UReynolds wenze ngaphezulu kwe-20 yezigidi zeedola kwiSithandathu esingaphantsi komhlaba kunye neSaziso esiBomvu kwaye iNetflix yabhengeza ngoJulayi ukuba ubenzela enye ifilimu, okuthetha olunye usuku lokuhlawula i-monster.
3. UMark Wahlberg- $ 58m
Isenzo sakhe sokuhlekisa iSpenser Confidential yifilimu yesithathu ebukelwe kakhulu yeNetflix. Wayeneentsuku zokuhlawula ezibalulekileyo kuthotho lwamaxwebhu iMcMillions kunye neWahl Street.
4. UBen Affleck- $ 55m
U-Affleck ubuyile emdlalweni ngendlela enkulu, ebambe inkwenkwezi kwiNdlela ebuyayo nakwiNetflix's Into yokugqibela awayeyifuna.
5. IVin Diesel- $ 54m
Ukukhawuleza nokuvutha komsindo 9 kusenokwenzeka ukuba kwamiselwa u-2021, kodwa ke wayenonyaka omkhulu, umzekelo, ngothotho lweNetflix oluKhawulezayo nolunomsindo.
6. Akshay Kumar- $ 48.5m
Inkwenkwezi ekuphela kwayo ye-Bollywood kuluhlu, uKumar usebenza kuthotho lwakhe lokuqala lweAmazon Prime, isiphelo. Kodwa iForbes ixele ukuba uninzi lwemali yakhe iza ngentengiso kunye nezahlulo zokuxhasa.
7. Lim Manuel Miranda- $ 45.5 yezigidi
I-Disney ifumene amalungelo kwimveliso yoqobo ye-Broadway ka-Hamilton nge-75 yezigidi zeedola kulo nyaka, iyenza ukuba ibe lixesha elikhulu. Unokulindela omnye umhla wokuhlawula omkhulu kunyaka olandelayo xa inguqulelo yefilimu yeeNdawo eziphakamileyo ikhutshwa.
8. Ngaba uSmith Smith- $ 44.5m
Iinkwenkwezi zikaSmith njengoRichard Williams, utata weethenisi ezinkulu uSerena noVenessa, kwiKing Richard ezayo.
ULuka Evans njengoCharles Cavendish, uAdam Sandler njengoNick Spitz noJennifer Aniston njengo-Audrey Spitz kwi-MURDER MYSTERY
9. UAdam Sandler- $ 41m
NgoJanuwari, watyikitya esinye isivumelwano sokwenza ezinye iimuvi ezine eqongeni emva kokuba ifilimu yakhe iMurder Mystery iye yaba yenye yeefilimu ezaziwa kakhulu zi-streamer ngalo lonke ixesha.
10. UJackie Chan- $ 40m
Inkwenkwezi yezobugcisa bemfazwe isasebenza njengangaphambili kwiminyaka engama-66, isenza iimovie ezintlanu kunyaka ophelileyo. Izivumelwano zokuxhasa kunye neelayisensi zokujongana nazo zikwalayini yesipaji sakhe esinephedi.
I-Forbes idibanisa uluhlu minyaka le ngokusekwe kwidatha evela eNielsen, ComScore, Box Office Mojo kunye ne-IMDB, kunye nodliwanondlebe nabangaphakathi kwishishini. Imirhumo yeearhente, abaphathi kunye namagqwetha ayixhuzulwa.
IForbes izakukhupha uluhlu lwabadlali ababhinqileyo abahlawulwa kakhulu ngoSeptemba.
Ufuna enye into ukuba ubukele? Jonga isikhokelo sethu kwi Olona luhlu lweTV lubalaseleyo kwiNetflix kwaye Iimuvi ezilungileyo kwiNetflix , okanye undwendwele eyethu Isikhokelo seTV .
smash abalinganiswa bokugqibela be-dlc bavuza
Iapile iphone 12 imihla yokukhululwa
inkwenkwe ephezulu isizini 3 cast
Ixabiso eliphambili leAmazon ngenyanga
UCaitlyn jenner ndingumntu okhuphisana nosaziwayo